Booliska Kenya oo digniin cusub ka soo saaray weerarrada Al-shabab ee Kenya | Baydhabo Online
Booliska Kenya oo digniin cusub ka soo saaray weerarrada Al-shabab ee Kenya
Booliska Dalka Kenya ayaa soo saaray digniin heerkeedu sarreyo oo ay shacabka dalkaas uga codsanayaan in ay Booliska ku wargeliyaan haddii ay arkaan qatarta weerarrada Al-shabaab.
Booliska waxaa ay digniintooda ku sheegeen in 9 Qof oo Kenyaan ah kuna biiray Al-shabaab ay hadda dib ugu laabteen Kenya islamarkaana qorsheynayaan weerarro ka dhan ah dowladda Kenya.
Afhayeenka Booliska Dalka Kenya George Kinoti a,ayaa sheegay in sagaalkaas qof ay intooda badan joogaan gudaha Kenya kuna howllanyihiin diyaarinta weerarrada ka dhanka ah dowladda iyo shacabka Kenya sidaas darteedna loo baahan yahay in laga hortago.
Waxaa uu xusay George Kinoti in sagaalkaas Qof ay qaarkood ku dhuumanayaan guryo ay gudaha ka siiyeen ehelkooda iyaga oo kaddibna qorsheynaya weerarro khasaare badan u geysta dowladda iyo shacabka Dalka Kenya.
Afhayeenku waxaa uu sheegay in Al-shabaab ay dadkaas u direen sidii ay dowladda Kenya uga aargudan lahaayeen weerarrada maalinlaha ah ee ay ka fuliso gudaha Soomaaliya.
Hay’adaha sirdoonka Kenya ayaa soo bandhigay magacyada sagaalka Qof ee ay Kenya sheegtay in ay weerar qorsheynayaan waxaana ay shacabka ka codsatay dowladda in markii ay arkaan wax la xiriiro argagixiso ay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu wargeliyaan Booliska si looga hortago.